नेपाल आज | कलेजो दान गरी डाक्टरलाई बचाएकी शान्ता
प्रोफाइल मेरो परिवार मेरो कथा समाज स्वास्थ्य
कलेजो दान गरी डाक्टरलाई बचाएकी शान्ता
शान्ताको सर्मपण र संर्घषको कथा
गोविन्द प्रसाद शर्मा पेसाले डाक्टर र प्राध्यापक हुन । उमेरले छ दशक काटिसकेका उनी २०६८ सालतिर कलेजो क्यान्सरले थला परे । उनको जीवन जोगाउन डाक्टरहरुले हर तरहले प्रायस गरे । केही लागेन । डाक्टरले हार माने र अन्तिम दिन तोकदिए । साठी दिनभित्र उनी मर्ने बताइयो । संगै, झिनो आशा पनि देखाइयोः कसैले कलेजो दान गरेमा शर्माको जीवन जोगिन्छ ।
सास रहिन्जेल आश भनेझैं डा. शर्माको लागि कलेजोको खोजी सुरु भयो । नजिकका आफन्तहरु कलेजोको प्रसंग आएपछि टाढाटाढा हुन थाले । अधिकांश आफन्त रगत परीक्षण गर्न समेत तयार भएनन् । कलेजो दानका लागि ईच्छा देखाइहालेका आफन्त मध्ये कसैको उमेर मिल्दैनथ्यो, कसैको रगतको समूह । आफू ठाऊंमा हुंदा शर्माले धेरैलाई जागिर लगाइदिएका थिए । उनको एक वचनले कैयौंको जिन्दगीमा रंग भरिएको झल्झलि सम्झिए । परिअाउँदा विन्ति सुनेदिने कोही भएन । इन्तु न चिन्तु भए शर्मा । मृत्युसम्भोगका लागि मानसिकरुपमा तयार हुन थाले । जीवनको दियो निभ्दैछ भन्ने थाहा हुंदाको पीडा अरुलाई के था ? गांईगुई चल्यो । डाक्टर शर्मा मर्दैछन् रे ।
शान्ता पोखरेलले पनि यो अशुभ खबर सुनिन् । नाताले भान्जी शान्तालाई शर्माजस्तो असल व्यक्तिको अकालको मृत्यु सह्य थिएन । मानवता र करुणाले उनलाई रोक्न सकेन । मामाको छट्पटी देख्न सकिनन् । परिवारको सल्लाह बिना आफ्नो कलेजो टुक्रा पारेर दान दिने निर्णय गरिन । उनको यो निजी विषय थियो । उनले कलेजो दान दिन्छु भने पनि परिवारले दिन पाउन्नस् भन्न सकेन ।
कलेजो प्रत्यारोपणका लागि दिने व्यक्ति नजिकको नातेदार (लिभिङ डोनर) वा मस्तिस्क मृत घोषित (ब्रेन डेथ डोनर) हुनुपर्ने प्रावधान छ । विकसित मुलुकमा कलेजो प्रत्यारोपण मस्तिष्क मृत्यु भएका दाताहरुबाट गरिन्छ । अष्ट्रेलियाले त मस्तिष्क मृत्यु भएका सबैजसोको कलेजो प्रत्यारोपणमा प्रयोग गर्दछ । हाल एसियाली मुलुकमा अंगदानको विषयमा जनचेतना वृद्धि भएको छ । एसियालीहरु पनि मस्तिष्क मृत्यु तथा जीवित दाताबाट कलेजो प्रत्यारोपण गर्न थालेका छन् । सोको अर्को सिंढी बन्ने भइन् शान्ता ।
दुई सन्तानकी आमा शान्ताले कलेजो दान गर्ने प्रस्ताव गरिन् । पहिला गोविन्दले नै शान्ताको प्रस्ताव अस्विकार गरे । आफु बांचेपनि शान्ताको बिजोग भइहाले कसरी हेर्नु ? उनलाई दकस लाग्यो । धार्मिक मान्यताअनुसारपनि भान्जीको केही त लिन हुदैन, त्यसमाथि कलेजो । एकातिर भान्जीको भावि जीवन, अर्कोतिर नजिकै रहेको मृत्यु । डाक्टर शर्मा धर्मसंकटमा परे । शान्ताले नाइनास्ति गरिन । शर्मासंग पनि विकल्प थिएन ।
नेपालमा कलेजोको शल्यक्रिया र प्रत्यारोपाण हुँदैन । यो जोखिमपूर्ण शल्यक्रिया हो । भारतको दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता छ । अहिले नेपालमै कलेजो रोगको परीक्षण हुन थालेको छ । रोगको पहिचानसम्म हुनसक्छ । कलेजो विरामीको पूर्ण तथ्याङ्क छैन । शान्ताको काठमाण्डौं–दिल्ली दौड सुरु भयो । गुडगावंस्थित अत्याधुनिक मेदान्त अस्पतालमा कलेजोको शल्यक्रिया हुने भयो ।
डाक्टरहरुले परीक्षण सुरु गरे । परीक्षणको तालिका २२ दिनको थियो । यस बीचमा रगत परीक्षण, दिसा, पिसाव, मुटु, सुगर, मृगौला, फोक्सो, कलेजो आदिको परीक्षण हुने भयो । परीक्षण सफल भएपछि कलेजोको क्रस म्याच गर्नुदपर्दछ । त्यसपछि पुनः तीन पटकसम्म रगत परीक्षण गराउनु पर्दछ । सबै परीक्षण सफल भएपछि कलेजको शल्यक्रिया र प्रत्यारोपण हुने भयो ।
शान्ता उमेरले चालिस नाघेकी थिइन् । शल्यक्रिया सफल नहुंदा ज्यानपनि जान सक्छ । ज्यान बंचेपनि दीर्घरोगी हुने जोखिम हुन्छ । आंखा वरिपरि छोरा छोरा घुम्न थाले । उनको प्रस्ताव सुनेका तर नाइ भन्न नसकेका श्रीमान् झल्झल्ती दिमागमा आउन थाले । छेवैमा थिए मामा गोविन्द । उनी पछाडि फर्कर्नेवाला थिइनन् । शल्यक्रियाको प्रक्रिया तालिकाअनुसार अगाडि बढ्याे ।
डा. गोविन्द र शान्ताको सबै परीक्षणबाट कलेजो लिन र लिन मिल्ने देखियो । शल्यक्रियाभन्दा पहिला अस्पतालले नेपाल सरकारको नो अवजेक्सन लेटर, डोनरको नागरिकता, डोनरको अभिभावकको नागरिकता र दुबैको नातासम्बन्धको प्रमाणपत्र, दाताका बाबुआमासँगको लिने व्यक्तिको सम्बन्धको प्रमाणपत्र, नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस, स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र र त्यसमा सरकारी स्वीकृति प्रमाणपत्रहरुको माग गर्याे ।
सामान्यजनका लागि यति धेरै कागजात समयमा जुटाउन असम्भव थियो । कागजात बटुल्दाबटुल्दै डाक्टर गोविन्दको ज्यान जाने दिन आइसक्थ्यो । शान्ताका श्रीमान चर्चित पत्रकार हुन् । पुरुषोत्तम दाहालको पहुंच र प्रभावलेमात्र समयमै कागजात बटुल्न सम्भव भयो । शल्यक्रियाका लागि २९ प्वाइन्ट रगत चाहिने भयो ।
विदेशमा फ्रेस रगत पाउन गाह्रो हुने नै भयो । फेरि दाहाल दलिए । पत्रकारको जिन्दगी अभाव, दवाव र तनावमा बित्दछ । तर, परिआउंदा उसको चिनजानले खुबै काम गर्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भयो । डाक्टरले शल्यक्रियाको दिन तोके । तीन दिन पहिला कलेजो लिने व्यक्तिलाई र दुई दिन पहिला दातालाई अस्पतालमा भर्ना गरियो ।
सरसाउदी श्रीमतीलाई शल्यक्रियाका क्रममा तलमाथि केही भए म आफैं जिम्मेवार हुनेछु भनि हस्ते गर्न विवश थिए उनी । मजबुरीका नाम महात्मा गान्धी भन्ने भनाइ दिल्लीमा खुब प्रचलित छ । शान्ताको समर्पणभावका सामू उनी बाध्य थिए ।
सबै कुरा ठीक भएपछि कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भयो । एक, दुई गर्दागर्दै २३ घण्टासम्म शल्यक्रिया चल्यो । शान्ता करिब ४८ घण्टा अचेत रहिन । डाक्टर शर्मा उनीभन्दा धेरै समय बेहोस रहे । होस नखुलुन्जेल सबैलाई के हो के हो भन्ने लागिरह्यो । जब दुबैको होस खुल्यो । खुशीको बहार छायो । होसमा आउंदा शान्ता शान्ता दिइनन्, जीवनदान गर्ने साक्षात देवीमा परिणत भइसकेकी थिइन् ।
दुई महिना आयु तोकिएका डाक्टर शर्मा अहिलेपनि हट्टाकट्टा छन् । सक्रिय जीवन जिइरहेका छन् । विराटनगर शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी पदमा छन् । शान्ताको घरगृहस्थी चलेकै छ । उनले शान्ता फाउण्डेशन नामक संस्था खोलेर समाजसेवाको क्षेत्रमा केही गर्ने प्रयास गरिरहेकी छन् । कलेजो दान गरेयता तीन तीन महिनामा दिल्ली गइरहनु पर्दथ्यो स्वाश्थ्य परीक्षणका लागि ।
अहिले छ महिना बिराएर दिल्ली गइरहन्छिन् । अब बर्षमा एक पटक जांदा पुग्छ । उनले जानेरै यो सब हैरानी लिएकी हुन् । त्यसैले हरेश खाएकी छैनन् । कलेजो दान गर्दा शरिर कहिलेकाही भारी भइरहन्छ । गहुंङ्गो काम गर्न हुंदैन । तरपनि केही छैन । मन चंगा छ ।
उनलाई केही गर्ने अठोट छ । उनले संगठित प्रयास थालेकी छन् शान्ता फाउण्डेसन संस्थामार्फत । उनले दुनियांले ख्याल नगरेको काममार्फत आफूलाई सेवामा समर्पित गरेकी हुन् । कलेजो दानका बारेमा कमैलाई थाहा थियो । अस्पतालमा आएका मानिसले समेत कलेजो दान गर्न मिल्छ र ? भनेर सोध्दथे ।
श्रीमान्, बुहारीका साथमा शान्ता
खाशमा कलेजो पूरै दिने होइन । कलेजोमा पत्रपत्र हुन्छ । सो मध्ये आवश्यक तीस प्रतिसत कलेजो दान गर्ने हो । प्रत्यारोपण भनेको अर्को मानिसकोमा लगेर रोप्ने हो । तीस प्रतिसत कलेजो बढेर पूर्ण आकारमा पुग्छ । यता, दाताकोपनि पहिलेकै ठाऊंमा आइपुग्छ । नेपालमा कलेजो प्रत्यारोपणको सुविधा नहुनाले धेरै कलेजो विरामीको मृत्यु हुने गर्दछ । पैसा हुनेहरुले विदेशमा गएर उपचार गर्दछन् ।
कलेजो प्रत्यारोपणको लागि चाहिने प्रविधि र विशेषज्ञ सेवा जस्तै एनेस्थेसिया, क्रिटिकल केयर सिर्भस, इन्टरभेन्सन रेडियोलोजी, प्याथोलोजी, हेपाटोलोजी पल्मोलजी, इन्फेक्सन डिजिज, इम्युनोलोजी ट्रान्स्पलान्ट एनेस्थेसियाको आधुनिक सुविधा नेपालमा उपलब्ध छैन । यी सुविधाहरु २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ । कलेजो प्रत्यारोपण खर्चिलो र जटिल हुने गर्दछ । भारतमा कलेजोको प्रत्यारोपण गर्दा ४० लाखदेखि ५० लाखसम्म लाग्ने बताइन्छ ।
कलेजो प्रत्यारोपणका बारेमा मुलुकमा उतिसारो बहश छैन । तर, यो बहश गर्नैपर्ने विषय हो । शान्ताले कलेजो दान दिएपछि मिडियाजगतलाई केही आर्कषित गर्यो । पत्रकार दाहालले शान्ताले गरेको दान र आफ्नो अनुभवलाई आधार बनाइ उपन्यास शान्ता लेखे । बर्दिया गुलरिया माइति भएकी शान्ताले अनायशै मोलेको जोखिम र त्यसपछिको संर्घष उपन्यासमा समेटिएको छ ।
परिवार सानो छ । एक छोरी र एक छोरा दुबै इन्जिनियर छन् । काठमाडौंमा एउटा कुटीपनि छ । शान्ताको स्वाश्थ्यलाई लिएर परिवारमा चिन्ता छाइरहन्छ । शान्ताले दान गरेकै भरमा डाक्टर गोविन्द जिवित छन् भन्ने सम्झदा बित्तिकै गर्वले छाति फुल्छ । शान्ताले आर्दश काम गरिन्, भलै यसले व्यवहारिक जीवनमा व्यथा थपेको होस् । चेली हुन त शान्ताजस्तो समाजमा चर्चा जो छ ।
प्रस्तुतिः नेत्र पौडेल
कमाउन कतार गएको एक्लो छोराको दुबै गोडा काट्न पर्ने भएपछि……मुटु चुडाउने रुचीदेबीको कथा
सशस्त्र संर्घष थाल्दै विप्लव माओवादी
ओली बोलीमै सिमित भन्दै पड्किए लोहनी, उसैगरी खनिए सरोज खनालमाथि
Living Liver Donner Shanta Pokharel